Wararka Maanta: Sabti, Apr 6 , 2013-Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya iyo Wafdi uu Hoggaaminayay oo si weyn loogu soo dhaweeyay Dalka Norway
Wafdiga ayaa waxaa soo dhaweyntooda ka qaybgalay Soomaalida ku nool magaalada Oslo ee xarunta dalka Norway, sidoo kale soo dhaweynta waxaa ka qaybgalay mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Norway.
Prof. Jawaari ayaa socdaalka uu ku tagay Norway waxay la xiriirtaa casuumad rasmi ah oo ay ka heleen dowladda Norway, gaar ahaan siminnaaro ku saabsan habka dowladaha iyo baarlamaannadu ay u wada-shaqeeyeen, waxaana wafdigan uu ka kooban yahay madaxda guddiyada baarlamaanka Soomaaliya.
Guddoomiyaha baarlamaanka ayaa inta uu joogo Norway oo ah shan casho ayaa wuxuu kulammo la qaadan doonaa madaxda dalkaas iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Norway; iyada Talaadada soo socota la filayo in guddoomiyaha uu la hadli doono jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkaas ku nool.
Dalka Norway ayaa wuxuu ka mid yahay dalalka Yurub ee ay Soomaalida badan ku nool yihiin, iyadoo Prof. Jawaari uu ka mid ahaa dadka Soomaaliyeed ee muddada dheer ku noolaa dalkaas, ka hor intii aan loo dooran xilka guddoomiyaha baarlamaanka.
Safarka guddoomiyaha baarlamaanka uu ku tagay dalka Norway ayaa wuxuu noqnoayaa kii labaad oo uu ku tago dalka dibadda ah tan iyo markii xilkaas loo magacaabay, isagoo horay u booqday dalka Itoobiya.